बाँकी ८ हजार भुटानीको छटपटी
एकलाख १२ हजार भुटानी शरणार्थीमध्ये अधिकांशको व्यवस्थापन अमेरिका, युरोप, न्युजिलेण्डसम्म भइसक्यो, केही न केही शरणार्थीहरुलाई धेरै मुलुकले व्यवस्थापन गरिदिए ।
अब बाँकी छन् ८ हजार भुटानी शरणार्थी, जो झापामा अहिले पनि राष्ट्रसंघले दिएको दालभात खाएर बसेका छन्, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो ठूलो समस्या बनेको छ ।
त्यति धेरै शरणार्थीको स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले यी बाँकी शरणार्थीलाई किन लगेनन् ? यो एउटा प्रश्न हो भने समस्या पूर्ण समाधान गर्न खोजेको हो भने यिनको पनि स्थायी बसोबासको प्रवन्ध गरिदिएको भए त टण्टै साफ, तुष राख्नुको कारण के होला ?
नेपालले भुटानी शरणार्थी फिर्ता लैजान १८ वर्षदेखि भुटानलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । भुटानले यी भुटानी नभएर अपराधी हुन्समेत भन्यो । भुटानले आफ्ना नागरिक लखेट्ने र भारतले तिनलाई आफ्नो भूमिबाट नेपालतिर लघारेर समस्या बिकराल बनाइदिएको हो । यद्यपि यिनीहरु नेपाली मूलका हुन् र नेपाली मूलका नागरिक भएका कारण नेपालले यिनलाइ बास दियो र आफ्नै थाँतथलो फर्काउन प्रयत्न पनि गरेकै हो । तर भुटानले अटेर गरेर समस्या बल्झाएपछि यिनलाई तेश्रो देशले स्वीकार गर्दै लगेको थियो । बाँकी नेपालमै रहेका छन् ।
सवालाखबाट ८ हजार बाँकी छन् र नेपालले अझै पनि भुटानसँग यिनलाई फर्काउन कुरा राख्नुपर्छ । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो र भुटान सदस्य । यो कारणले पनि नेपालले भुटानसँग सहज वार्ता गरेर शरणार्थी समस्या सल्टाउन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी आयोगले यिनलाई परिचयपत्र दिएको छ र सहयोग गरिरहेको छ । अव यिनलाई सहयोग होइन, आफ्नै घरबास चाहिएको छ, जुन नेपालले भुटानसँग वार्ता गरेर निकास निकाल्न सक्रियता देखाउनै पर्छ ।